Iingqungquthela ezisixhenxe zeWebhu zokuHlulwa kweWebhu kwi-Intanethi - i-Semalt Expert Opinion
Iinkcukacha eziboniswe kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kunye neeblogi ziyakucinywa kuphela ngokusebenzisa i-web ekhethekileyo abaqingqiweyo. Ungakwazi ukukopisha ngesandla uze unamathisele idatha ebalulekileyo kwiMqulu yeLizwi okanye ufumane inkqubo ye-web scraping efakwe kumatshini wakho. Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi indlela oyikhethayo, uya kuba nokufikelela okupheleleyo kumbhalo ofunwayo kunye nemifanekiso. I-software yokuqhafaza iWebhu iyithwala ngokuzenzekelayo kwaye icacise idatha kwiziko ezahlukeneyo ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Ezinye zezona zixhobo ezilungileyo kunye ezintle zikhankanywe ngezantsi.
1. I-A1 Yewebhsayithi ye-Scraper:
Ukusebenzisa le software ye-scraping software, unokugcina kalula idatha yakho kwifom yeefayile ze-CSV okanye ufumane ezo fayile ezingeniswe kwisixhobo seofisi okanye kwiwebhu yolwazi. Esi sixhobo sikhulu ukukhupha imifanekiso kwiiwebhusayithi ezinzima kwaye isebenza kwimozulu, iindawo zokuhamba kunye neehotele, ukukhipha idatha yabo ngemizuzwana.
Le yenye yeenkqubo ezinamandla kakhulu zokuqhawula iwebhu. Ikhululekile ngeendleko kwaye idala iifayile ezilungiselelwe kakuhle kwaye zihleliwe. Inxalenye engcono kukuba inokukunceda ukukhipha izinto ezivela kwizicelo ezahlukeneyo zewebhu kwaye ziguqulelwe kwifomethi ye-JSON, ama-spreadsheet, kunye ne-Linq ikhowudi.
I-CatchPage isebenza ngokufanelekileyo kubo bobabini beprogram nabangewona program kwaye ayifuni ukuba uhlawule ezininzi kwi-premium version yayo..Ngenye yeenkqubo ezinamandla kakhulu zokuqhawula iwebhu ezithatha idatha kumaphepha aphuzi, iphepha elimhlophe, kunye neeletele ezinkulu ngaphandle kwengxaki.
4. I-Craigslist yeWebhu kunye ne-imeyile Inkcazo:
Inguqu yamahhala ye-extractor yewebhu isetyenziswa ngokubanzi ngabathengisi bezobuntu, ii-SEO, kunye nemibutho emikhulu. Unokufumana imithwalo yedatha ngaphandle kokukhathazeka ngobunjani bayo. I-Craigslist yewebhu kunye ne-imeyile yecandelo elungileyo yezobini iiwebhusayithi kunye ne-imeyile kwaye inokukhupha zonke iimibhalo eziwusizo kunye nemifanekiso kwisithuba seeyure.
5. Ukukhupha naluphi na indawo:
Ukuba ukhathele ngemveli, iinkqubo ze-premium ze-web scraping kwaye uzikhangela ngokuthe ngenye indlela. Naphi na. Ngenye yeenkqubo ezinamandla kuninzi kwaye inceda ukuqokelela, ukulungelelanisa nokugcina idatha ngaphandle kwanani na ubunzima bayo. Ngeli sixhobo, unako ukufumana idatha efunwayo kumasekhondi kuneeyure. Ngaloo ndlela, igcina zombini ixesha lakho namandla kwaye inika iziphumo ezichanekileyo.
6. Fayile i-imeyile kunye ne-Web Scraper:
Ifayile ye-imeyile kunye ne-Web Scraper ikuvumela ukuba ukhuphe zonke iidilesi ze-imeyile kunye nomxholo wewebhu, kwaye unokuyikopisha uze unamathisele le datha kwiifayile zakho ze-Word. Ngaphandle koko, iyakwazi ukugcina iifayile ze-CSV, ii-PDF kunye ne-XML ifayile yakho kwisiseko sayo, ongayifumana nayo nayiphi na into oyifunayo.
Umfaki-mafayili ungumntu okhululekileyo kunye nenye yezona zinto zinamandla kakhulu, ukukhutshwa kwewebhu, ukuvunwa kwewebhu, ukukhwabanisa kwewebhu kunye neeprogram zokucoca. Ungayisebenzisa njengento yokuqala ebonakalayo kwiwebhu njengokuba esi sixhobo siphucula zombini iitekisi kunye nemifanekiso. Iyakwazi kwakhona ukukhupha umxholo okhethekileyo kwiifayile zevidiyo kwaye unokwenza imisebenzi eyahlukeneyo kwimida yemizuzu. Inxalenye engcono kukuba iyakusindisa idatha kwidivaysi yayo yokugcina ifu okanye uyilayishe kumatshini wakho.